६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको अनौठो प्रेम कहानी – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको अनौठो प्रेम कहानी
उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् ।केसी चलचित्रका सर्वा्धिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् । उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् । दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको रहस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
भुवन दोस्रो विवाह पनि सफल नभएर एक्लिएको बेलामा जियाले भुवनलाई साथ दिएकी थिइन् । सन् २०१४ देखि भुवन र जिया दुइ जनासंगै बस्न थालेका छन् । जिया भुवनकै घरमा बस्छिन् । उमेरले ६० वर्ष पुगिसकेका भुवन अहिले पनि उत्तिकै आकर्षक छन् र युवतीका कारण चर्चामा आएका छन् ।उनीहरुले विवाह गरेको छैन भनेका छन् तर परिवारले भने जियालाई भुवनको जोडी भनेर स्वीकार गरेको बताइएको छ ।
केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा अभिनेता भुवन केसी र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहबीचको विवाद चलिरहेको छ । सो विवाद अहिले राष्ट्रिय कलाकार संघ हुँदै अहिले अदालत सम्म पुगेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नायक भुवन केसीले नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहविरुद्ध मु द्दा दर्ता गरेका छन् । उनले १० करोडको क्षतिपूर्तिको माग सहित मु द्दा दर्ता गरेका हुन् । नायिका शाहले आफुलाई गलत आरोप लगाएको भन्दै भुवन अदालत गएका हुन् ।
बिश्वस्त सूत्रहरुका अनुसार भूवन केसी र जीया केसी लामो समयदेखि ‘लिभिङ टूगेदर’मा छन् । भुवनको घरमा जीया केसीलाई धेरै पटक देखेको केही चलचित्रकर्मी बताउँछन् ।भुवनसँग निकट भएपछि जीया अहिले चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय छैनन् । तर, एक्ला भूवन केसीलाई जीयाले उनकै घरमा बसेर साथ दिइरहेकी छिन् ।लिभिङ टुगेदरको कुरालाई दुबैले अस्विकार गर्दै आएका छन् । तर, भुवन केसीको घरमा काम विशेषले पुग्ने चलचित्रकर्मीले जीयालाई पनि कैयौंपटक भेटेको बताउँछन् ।
भुवन र जीयाको यो लुकिछिपी प्रेमले कहिले औपचारिकता पाउला त ? जीयाले भुवनसँग बिहे गर्ने चाहना सार्वजनिकरुपमै राखे पनि भुवनले भने अहिलेसम्म हरियो बत्ति बालिसकेका छैनन् । यसबारे उनले सार्वजनिकरुपमा केही टिप्पणी गरेका पनि छैनन् ।
अरु लाई बचाएर आफुहरु अस्ताए बाढी को त्यो लेदोमा उहाहरुको आत्मशान्तिको लागि एक लाइक र एक सेयर गरेर गर्दिनु